Bangladesh: Momba ny Zon’Olombelona sy ny Vahoaka Ivelan’ny Sisintany · Global Voices teny Malagasy
Bangladesh: Momba ny Zon'Olombelona sy ny Vahoaka Ivelan'ny Sisintany
Voadika ny 03 Janoary 2019 11:03 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2008)
Anatin'ity fehin'ny herinandro ity, mibanjina ny lohahevitra resahin'ireo bilaogy Bangladeshi samy hafa isika.
Momba ny Zon'olombelona- iza no atao hoe olombelona?
Miresaka momba ny fahafatesan'Atoa Qayyum Khan raha izy nampidirina fonja vonjimaika i Rumi avy ao amin'ny In the Middle of Nowhere. I Qayyum Khan izay solontena voafidy tanatin'ny governemanta ao an-toerana sady mpikatroka mafana fo tao amin'ny BNP (Antoko Nasionalistan'i Bangladesh). Manameloka ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ho tsy miaro ny raharahan'i Khan i Rumi:
“Na dia nafonja tokoa aza ny dradradradran-dRtoa Qayyum tao amin'ny fahitalavitra, azoko antoka tsara fa; tsy hipàka any amin'ireo mivelona amin'ny olana momba ny zon'olombelona mihitsy ny dradradradrany. Tsy hisy fanairana maika hanao hetsika, tsy hisy fanambarana, tsy hisy bilaogy, tsy hisy vondrona facebook, tsy hisy famaizan'ny feon'ny fieritreretana. Olombelona ianao raha toa ka vadinà mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo voatana an-tranomaizina, na mpitarika olona vitsy an'isa, na koa mpanao gazety. Hohainoina ianao, horesahina. Fa ireo Qayyum, Alal, Tareq ireo kosa tsy olombelona. Tsy miresaka momba ny zon'ny tsy olombelona ireo mpanaramaso ny fiarovana ny zon'olombelona. Tsy manan-jo izay tsy olombelona.”
Kotaba be momba ny raharaha politika manohitra an'i Sheikh Hasina
Mahoraka ny sehatra politika ao Bangladesh amin'izao, miaraka amin'ilay tantara tsy mitsaha-mivoatra momba ny fitsaràna ny Praiminisitra teo aloha sady talen'ny Ligy Awami noho ireo tranganà kolikoly. Raha sendra manontany tena ny momba izany kotaba rehetra izany ianao, manasa anao hamaky ny lahatsoratry ny Dr. Abdul Momen izay mivahiny ao amin'ny bilaogy Shada Kalo:
“Samy tanterahina anaty fitsaràna manokana natsangana eo ambanin'ny EPR ireo fitsaràna ireo. Mandainga ny fitondrana amin'ny filazàna fa tsaraina eo ambanin'ny ‘lalàn'ny tany’ izy ary afaka miaro ny tenany.”
Ny tantaran'ireo Bengal roa
Taorian'ny fitsidihany an'i Kolkata, any Bengal Andrefana (Inde) farany teo, niezaka nanangana tetezana ara-kolontsaina mampifandray ny any sy i Bangladesh, Bengal Atsinanana teo aloha, ny Dr Anwarul Kabir:
“Noho ny fetra ara-piarahamonina, ara-politika ary ara-jeografika miaraka amin'i Bengal Andrefana, namorona tsiron'ny kolontsaina Bengali samy hafa kokoa nóho ny an'i Bengal Atsinanana i Bangladesh.
Hitako tamin'ny fifaneraserako tamin'ireo vahoaka antonony tao Kolkata fa maro amin'ireo Bengali Indiana no mahatsikaritra fitsaràna an-tendrony an'ireo Silamo Bengali ao Bangladesh. Angamba niainga avy amin'ireo vondrompiarahamonina Silamo any Bengal Andrefana io fahitàna io, izay tena mitandrina ny fomban-drazana ary miaina anaty fiarahamonina mihidy. Kanefa raha ny fisehoan-javatra, mahay mandanjalanja kokoa sy lahíka ireo Silamo Bengali anatin'ity faritr'i Bengal ity.”
Miantso adihevitra mafana iray hafa i JRahman ao amin'ny Mukti. Tokony hotenenina amin'ilay dika tsy misy tomika ve ny Bangla sa miaraka amin'ireo lantompeo mivoatra?
“Iza no manapa-kevitra ny fampiasa? Azo antoka fa tsy rariny raha toa ka ireo manampahaizana taty Kolkata tamin'ny taonjato faha-19 no hanapa-kevitra ny azontsika sy ny tsy azontsika tenenina ankehitriny.”
Manana torohevitra mahomby vitsivitsy ho an'ireo vao tonga ao Bangladesh ny bilaogera mpila ravinahitra, Shawn, ao amin'ny The Uncultured Project. Manana lisitr'ireo entana tokony entin'ireo mpitsidika (rohy maty) an'i Bangladesh ihany koa i Mickey Leung ao amin'ny Joybangla.info.
4 andro izayArabia Saodita